Sawirrada Dagaalkii Kulbiyow oo la faafiyay. (Bayaan+Sawirro) – Shabakadda Wararka Amiirnuur
Sawirrada Dagaalkii Kulbiyow oo la faafiyay. (Bayaan+Sawirro)
January 31, 2017 1:42 pm by admin Views:
Mu’assasada Al-Kata’ib ee garabka Warbaahineed ee Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa baahisay Sawirada dagaalkii cuslaa ee Jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka Kulbiyow ee Gobolka Jubbada hoose, kaas oo lagu laayay ku dhawaad 70 Askari oo Kenyaan ah.
Masha Allah cadowgaas jabkiisa waan kufarxay
Yaa rayta alshabaab hadday gaalada markasto weerari lahaayeen oo ay iska dayn lahaayeen muslimiinta masaakiinta ah ee hoteellada muqdisho agmaraya way aflaxi lahaayeen
Sidaas ayaa jihaad la yidhaahdaa bal kaasba ha la arko qof diidan maashaa alaaah
kuwa qaba in alshabaab dhib ku hayaan muslimiin maxay u arki waayeen africaanta iyo itopianka injirta korkooda ka buuxdo oo dadka jiirsiinaayo baabuurta magaalada muqdisho iyo gobolada dalka? maad u arki wayseen xoolaha somaliyeed ee diyaaradaha lagu duqeynaayo? maxaad u arki weseen gabdhaha somaliyeed ee sharaftoodii adoontaan ku tumaneeyso? war hooy cidii shaki kurijo in sha allah madaxa ayaa laga toga doonaa
kuwa qaba in alshabaab dhib ku hayaan muslimiinta maxay u arki waayeen africaanta iyo itopianka injirta korkooda ka buuxdo oo dadka jiirsiinaayo baabuurta sida kadhacday magaalada muqdisho iyo qaar ka id ah gobolada dalka?
maxaad u arki wayseen xoolaha somaliyeed ee diyaaradaha lagu duqeynaayo? sida kadhacday gobolka gedo maxaad u arki weyseen gabdhaha somaliyeed ee sharaftoodii adoontaan ureysa ay ku tumaneeyso?
war hooy cidii shaki kurijo waxaan dhacaya, inteena wax garaneyso waxay noo cadeyneysaa dad nimo xumada kujirto korkooda laa kiil ogow in sha allah doofaarada aan gudneyn ee soo duulay iyo cawaantooda ay u adeegsadaan jawaasiis nimada madaxa ayaa laga togan doonaa ha dhawaato ama hadheeraato in sha allah. dag nikii laga wayo warankaa u daawo ah.